Donation Event for 2012-March(MD-24) « One Dollar Fund – Myanmar (ODF Myanmar)
Donation Event for 2012-March(MD-24)
2012-March Donation Event
We are very pleased to announce that ODF Myanmar has donated 1,800,000 Kyats (2656 SGD + 80000 Kyats contributed by Ma Soe Soe Kyi and friends) to “Yadanar Aung Myin” Orphanage located at Bone Pyan Monastery, Pyi Gyi Tagoon Township,Mandalay as the place for 2012-March donation plan on 29-April-2012.
“Yadanar Aung Myin” isaboys’ orphanage which was established to look after orphans from different ethnic groups and the Abbot has been taking care of 122 students:5university students including one post-graduate student who is studying at Institute of Technology,7infants,2preschool students, 76 primary school students, 26 secondary school students and6high school students.
Since it is notamonastic education center, students are sent to government high schools and primary schools for education.
We would like to express our gratitude and thanks to, for the successful donation to that orphanage where the education aid to the orphans are vigorously provided, all the donors who contributed physical help, pieces of advice and cash, ODF volunteers, Admin Team members, Ma Me Me Htun who helped us manage to plan the donation event and Ma Soe Soe Kyi and friends who assisted in arranging the event. Thank you all very much.
ODF Myanmar ၏ ၂၀၁၂-မတ်လအလှူအဖြစ် မန္တလေးတိုင်း ပြည်ကြီးတံခွန်မြို့နယ် စက်မှုဇုံ အနီး ဘုံပျံတောရကျောင်းတိုက်တွင်တည်ရှိသည့် ရတနာအောင်မြင် မိဘမဲ့ကလေးများစောင့်ရှောက်ရေးကျောင်းအား ၂၉-ဧပြီလ-၂၀၁၂ ရက်နေ့တွင် မြန်မာကျပ်ငွေ ၁၈ သိန်းတိတိ (မတ်လအတွက် ကောက်ခံရရှိငွေ ၂၆၅၆ စင်္ကာပူဒေါ်လာ (၁၇၂၀၀၀၀ ကျပ်) နှင့် မစိုးစိုးကြည်နှင့် သူငယ်ချင်းများ၏ အလှူငွေ မြန်မာကျပ်ငွေ ၈၀၀၀၀ ကျပ်) အား လှူဒါန်းနိုင်ခဲ့ပါသည်။
ကျောင်းသားဦးရေ (၁၂၂)ယောက်ရှိသည့် တိုင်းရင်းသားမိဘမဲ့ အမျိုးသားကျောင်း၏ နာယကဆရာတော်မှာ ဘဒ္ဒန္တမေဓာဝံသ (ဓမ္မာစရိယ) ဖြစ်ပြီး ထိုကျောင်းတွင် နည်းပညာတက္ကသိုလ်( M.E ) တက်ရောက် နေသော ကျောင်းသားတစ်ဦးအပါအဝင် တက္ကသိုလ်ကျောင်းသား (၅)ဦး၊ နို့စို့အရွယ်(၇)ဦး၊ မူကြိုကျောင်းသား(၂)ဦး၊ မူလတန်းကလေး(၇၆)ဦး၊ အလယ်တန်းကလေး(၂၆)ဦး၊ အထက်တန်းကလေး(၆)ဦး ရှိပါသည်။
အဆိုပါကျောင်းသည် ဘုန်းတော်ကြီးပညာသင်ကျောင်းမဟုတ်သည့်အတွက် ကျောင်းသားများကို အစိုးအထက်တန်းကျောင်း၊ မူလတန်းကျောင်းသို့ပို့၍ ပညာသင်ကြားစေသည်ဟုလည်း သိရပါသည်။
ထိုကဲ့သို့ ကလေးများ၏ ပညာရေးအား ပံ့ပိုးအားပေးနေသော မိဘမဲ့ကလေးများစောင့်ရှောက်ရေးကျောင်းတစ်ကျောင်းအား တစ်ဖက်တစ်လမ်းမှ အားဖြည့်ကူညီနိုင်ခဲ့ခြင်းအတွက် ကာယအလှူ ၊ ဉာဏအလှူ ၊ ငွေသားအလှူများ လှူဒါန်းခဲ့ကြသည့် အလှူရှင်များ ၊ စေတနာ့ဝန်ထမ်းအဖွဲ့ဝင် (ODF Volunteers) များ၊ စီမံခန့်ခွဲရေးအဖွဲ့ဝင် (Admin Team members) များ ၊ အလှူဖြစ်မြောက်ရေးအတွက် ကိုယ်တိုင်ကိုယ်ကျ သွားရောက် လှူဒါန်းပြီး အစစအရာရာ စီစဉ်ပေးသော မမီမီထွန်း ၊ မစိုးစိုးကြည် နှင့် သူငယ်ချင်းအား ODF Myanmar အဖွဲ့မှ အထူး ကျေးဇူးတင်ရှိပါသည်။